अन्तिम दाहसंस्कारको समय जब ला’सले टाउको हल्लाउन थालेपछि मानिसहरू घाट छाडेर भागाभाग्! – All top Here
Home/अन्तर्राष्ट्रिय/अन्तिम दाहसंस्कारको समय जब ला’सले टाउको हल्लाउन थालेपछि मानिसहरू घाट छाडेर भागाभाग्!
अन्तिम दाहसंस्कारको समय जब ला’सले टाउको हल्लाउन थालेपछि मानिसहरू घाट छाडेर भागाभाग्!
एजेन्सी । भारतको ओडिशा स्थित गन्जाम जिल्लामा एक अनौठो घटना घटेको छ । जसमा जुन व्यक्तिलाई मानिसले देहवसान भएको सम्झिएर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि घाटमा लगेका थिए, ती व्यक्तिले अचानक आफ्नो टाउको हल्लाउन लागे र जि’उँदो निस्केका छन् । त्यसपछि केही मानिसहरु डराउँदै त्यहाँबाट भागेका पनि थिए । डाक्टरहरुका अनुसार कपकहाला गाउँमा ग्रामीण सीमान्चक मलिकलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि घाटमा लगिएको थियो ।
तर उनले टाउको हल्लाएपछि उनलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लगियो । जहाँ उपचारपछि उनको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार मलिक भेडाबाख्रा लिएर शनिबार जंगल गएका थिए । सबै गाइबस्तु बेलुका घर फर्किए तर उनी फर्किएनन् ।
यसका साथै शनिबार बिहान केही मानिसहरुले मलिकलाई असामान्य अवस्थामा भेटे र उनलाई घर लिएर आए । परिवारका सदस्यहरु र गाउँलेहरुले मलिकलाई मृ त ठान्दै अन्तिम संस्कारको तयार गरेका थिए । मलिकको उपचारपछि उनको अवस्थामा सुधार आएको पूर्व स्थानीय सरपञ्च रन्जन मलिकले बताए ।
किन जान दिईँदैन महिलालाई मलामी ?
हिन्दु धर्मको परम्परा अनुसार, मृ त शरीरलाई जलाउने बेला महिलाहरूलाई मलामी लानुहुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, किन थाहा छ ? आज हामी तपाईँहरूलाई प्राचीनकालमा महिलाहरूलाई किन मलामी लिईदैँनथ्यो भनेर केहि कारणहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।
महिलाहरूले विशेष गरी घरायसी काम गर्ने र पुरुषहरूले घरबाहिरको काम सम्हाल्ने अधिकांस घर परिवारमा चल्दै आएको प्रथा हो । यो प्राचिन समय देखि नै यसैगरि चल्दै आएको छ । समय बित्दै जाँदा यो नै परम्परा अनि संस्कृति बन्यो । घरायसी काम महिलाले र परिश्रम बढी गर्नुपर्ने घर बाहिरका काम पुरुषले गर्ने चलन बन्यो ।
मलामी जाने चलन पनि यही सोचबाट संस्कारका रुपमा बदलिएको जनविश्वास रहेको छ । महिला मलाली जानु हुन्न वा पुरुष मात्र मलामी जानु पर्छ भन्ने कहिँ कतै शास्त्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको भेटिँदैन । बिना कारण केवल प्रथा चल्दै आएकाले नै महिला मलामी जान हुन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ । प्राचीन कालमा भने महिलालाई मलामी नलानुका कारणहरू यस्ता थिए;
मलामीबाट फर्केकालाई चोख्याउन महिला घरमा बस्नुपर्ने : प्राचीन दिनहरूमा पुरुषहरूले लासलाई घाटमा लगेर जलाउँदै गर्दा महिलाले घरको काम धन्दा भ्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । साथै, घाटमा गएर फर्केका मलामीहरू घर फर्किएपछि आगोको धूपले पवित्र बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो त्यसकारण महिलाहरू घरमै बस्ने गरेको पाईन्छ ।
श व जल्दै गरेको डरलाग्दो दृश्य हेर्न महिलालाई गाह्रो : ला स जलाउने काम कमजोर मुटु भएकाले गर्ने काम होइन । अघि भर्खरसम्म जिउँदै देखेको मानिसलाई अहिले जलाएको हेर्नुपर्दा जस्तो सुकै कठोर मन पनि भक्कानिन्छ । यस्तो भयानक दृश्य महिलाहरूले हेर्न सक्दैनन् र सम्हालिन गाह्रो हुन्छ भनेर पनि पहिलेपहिले महिलालाई मलामी नपठाईएको पाईन्छ ।
श व जल्न समय लागदा घरको काम वित्ने : हिन्दु धर्मअनुसार, कुनै पनि मानिसको अन्तिम संस्कार गर्दा शरीरलाई पुर्ण रूपमा जलाउनुपर्दछ । कसैको शरीर त केहि घण्टामै जल्दछ भने कसैको निकै समय पनि लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा घरमा बालबच्चा अनि गाईवस्तुको हेरचाह गर्नुपर्ने हुनाले पनि त्यतिबेला महिलाहरूलाई घरमै राख्ने गर्दथे ।
महिलालाई आ त्माले आ क्रमणको भय : मसानघाटमा तड्पिएर बसेका आ त्माहरूको (भूत) उपस्थिती हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो र गरिन्छ । यस्ता ‘भूत’ले कमजोर हृदय भएका महिलाहरूलाई आ क्रमण गरेर शरीरलाई अधीनमा लिन्छन् भन्ने विश्वासले पनि महिलाहरुलाई मशानघाट नलगिएको हुनसक्छ । विशेष गरी कुमारी केटिहरूलाई यस्ता भूतले बढि रुचाउने पनि विश्वास गरिन्छ । त्यसैले पनि मसानघाटमा महिलाहरूलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भन्ने गरिन्छ ।
‘आँशु’ले आ त्माको बाटो छेक्छ भन्ने संस्कार : ‘आँशु’ले आ त्माको बाटो छेक्छ भन्ने हिन्दु धर्मको संस्कारमा विश्वास गरिन्छ । म रेको मान्छेको अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि मात्रै आ त्माले बिदा पाउँदछ र यदि त्यहाँ एकथोपा पनि आँशु खस्यो भने त्यो आ त्मा सँधै त्यहिँ अड्केर बस्दछ भन्ने चलन छ । महिलाहरूले सजिलै आफ्नो आँशु रोक्न सक्दैनन भनेर पनि मसानघाटमा जान नदिईएको भन्ने विश्वास रहीआएको छ ।
प्रथा र संस्कृति समय अनुसार परिवर्तन गरिनु आवश्यक हुन्छ । परिवर्तन गर्दा सहज अनि अर्थ बोक्ने प्रथा जरुरी हुन्छ । नत्र प्रथा रुढीवादी हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ अनि प्रथा र संस्कृतिको अर्थ अथर््याउन नसक्दा त्यो प्रथामा चलिरहनुको कुनै अर्थ रहदैन ।
वैज्ञानिकहरुलाई काेराेना भाइरस खाेप : ठूलाे सफलता
इतिहासकै दुर्लभ सूर्यग्रहणः देखियो ‘रिंग अफ फायर’ लाइभ भिडियो हेर्नुहोस्